Falcó, nguArturo Pérez-Reverte. "Ndiqhwalela ngonyawo abandinyathela ngalo." | Uncwadi lwangoku
Falcó, nguArturo Pérez-Reverte. "Ndiqhwalela ngonyawo abandinyathela ngalo."
Falco, inoveli yokugqibela ka-Arturo Pérez-Reverte.
Elo libinzana elinokuthi lishwankathele isimilo somlinganiswa omtsha owenziwe nguArturo Pérez-Reverte. Lowo, okanye lowo umphathi wakhe, u-Admiral, uxelela ngobunye ubusuku xa embona enxibe iyunifomu: "Kulungile ukuba ubonakale uhloniphekile amaxesha ngamaxesha, ngotshintsho." Ngaphandle koko, yeyona nto inomtsalane, inhle, isebenza kakuhle kwaye iyingozi. E-Spain ngo-1936, owayesandul 'ukuphakama ngengalo, akukho namnye unjengaye owayekhwela inqanawa yamaKayin ezenze ngathi yinjongo. apho ilizwe laba khona.
Iyathengiswa ukusukela nge-19 ka-Okthobha ophelileyo, Ndiyifumene kwiintsuku ezine ezidlulileyo, nto leyo endithathileyo ndayifunda. Kwaye ibiya kuba lixesha elincinci ukuba umoya wam othile ujolise ngakumbi kulonwabo lokufunda. Nangeyiphi ndlela, Incwadana emfutshane pI-ero ayindonwabisanga kwaye ayindonwabisanga. Kwaye inemathiriyeli yazo zombini. Nangona ndiphinda phinda ukuba uninzi lolu luvo luthobekileyo lubangelwa ngumoya wam wangoku wokufunda. Okanye ukuba sele ndifunde ngokufanayo. Abo kuthi abathanda uReverte bahlala bonwabela indlela yakhe yokubalisa ngobomi, kodwa ngeli xesha bendifuna okungakumbi.
1 Malunga noLorenzo Falcó
2 Isitayile esingenakuphikwa
3 Iibhokhwe zam
Malunga noLorenzo Falcó
Ndizifundile phantse zonke iinoveli zikaReverte, nangona kufuneka ndiyivume loo nto iminyaka embalwa ngoku ndikhetha ubukrwada bakhe, amathumbu kunye nokuziphatha njengomlobi wekholamu kunokuba abe ngumbhali. Ke ndiyamlandela ngakumbi kumaphephandaba kunye neyakhe Ilungelo lobunikazi le-corso nakwitheko elihlala lingenelela kwakhe kwi-Twitter. Kodwa ndizama ukufunda yonke inoveli entsha kunye nale Falco Ndibambe ingqalelo yam ngakumbi kunangaphambili.
Kwi-Falcó, amagama afana nelizwe, uthando okanye ikamva awanangqondo.
Nokuba lilizwe, okanye iflegi, nothando, imbeko, nehlazo. I-Falcó inomdla kuphela kubomi bokuphila ngeyona ndlela ibalaseleyo kunye neyona intle eminweni yakhe: ubunewunewu bazo zonke iintlobo kunye nabasetyhini abazama ukubenza iflegi. Owayesakuba ngumthengisi weengalo, iarhente yenkonzo yezobuntlola, nayo nayiphi na into eyenzekayo, okoko nje ibandakanya ukuzonwabisa kunye nokuzuza. Zonke zinokungqubana okuncinci okanye kungabikho kwaphela.
Ke, ekwindla lowe-1936, uFalcó wasebenzela iSNIO-uLwazi lweSizwe kunye neNkonzo yokuSebenza- kunye Bammisela umsebenzi obuthathaka: ukufumana ibanjwa elibaluleke kakhulu kwintolongo yaseAlicante. Ukwenza oku, uya kuba neqela le-Falangists (abancinci kunye nabagqibeleleyo) ekufuneka ebakhokele. Kodwa akukho nto kwaye akukho mntu uya kuba yile nto ibonakala ngathi. Mhlawumbi ngenxa yokuba ebomini, kwaye ngakumbi ebomini emfazweni, sonke singayeka ukuba singobani.
Ngamaxesha anje ngala, ukuba yingcuka yayikuphela kwesiqinisekiso. Kwaye hayi rhoqo. Kungenxa yoko le nto uboya obumdaka ngebala babuluncedo. yanceda ukusinda. Ukuhamba ungabonakali ubusuku bonke nenkungu.
UPererez-Reverte Ubalisa ibali elimnyama kunye neentlola ezaziwa izihlandlo eziliwaka ngohlobo lwayo kunye nesimbo, esaziwa kakuhle kuthi kuthi abo basifundayo: izivakalisi ezifutshane zixutywe nezide kunye nezihlomelo ezichazayo; iingxoxo ezilungileyo kakhulu, ngakumbi ezo zika Falcó kunye nomphathi wakhe, iAdmiral, kum oyena mlinganiswa ubalaseleyo okanye lowo bendimthanda kakhulu; kunye nomxholo onesingqisho kunye nokujija onokulindela (okanye hayi). Kuyo yonke inkcazo isitampu esiqhelekileyo sombhali: ukuthanda kwakhe kunye nolwazi ngemeko yomntu.
Ukuchaza i-Falcó njengegorha okanye i-antihero kuyisidenge. Mthelekise nomlinganiswa ongxamisekileyo kaPérez-Reverte, uKapteni Alatriste. Umbhali waseCagagagena ngoku ukhetha ukususa owona mthwalo usindayo kwibhegi yakhe ebalulekileyo, apho kunjalo bambalwa kakhulu abelana kwinqanaba labo.
Ithala lam leencwadi lasePérez-Reverte
Oko, umfundi oqhelekileyo wohlobo olumnyama omnyama, andiziva ukuba ndinento entsha ezandleni zam. Zininzi iinkohliso ezifana neFalcó, kwaye ibabonise kungquzulwano olungenabungozi njengeMfazwe yamakhaya yaseSpain, ayincedi nto nokuba yinto entsha. Sonke siyazi ukuba ii-scoundrels zawo onke amacala kunye nemibala zazingasweleki. Ukukhumbula, ngokoluvo lwam, akuyomfuneko kwaye kuyadinisa.
Ngokuphathelele ububi, ukunqongophala kokuziphatha nokuziphatha okubi ... Ewe, ke, sonke singathanda ukuzisusa ngandlela ithile kwaye uncwadi lusinika oko kunokwenzeka. Kodwa ngokuchanekileyo kuba wabonisa oonobumba abacace gca kwasekuqaleni, ayothusi into yokuba uFalcó ngunyana wenja. Ngenxa yoko, ayimangalisi into ayenzayo okanye ayenziyo, ingenguye nabanye abalinganiswa. Ngokombono wam, abazisi ngaphezulu komdla (othile) kwindlela abaza kudibana ngayo, ukungcatshwa okanye akunjalo kuya kwenziwa kwaye kuya kubasusa.
Kuhleli kuwe kuphela ukuba uthathe ithuba, kwakhona, ngesimbo sombhali, iprozi yakhe ebalaseleyo kunye nebalaseleyo kunye nembali yakhe enkulu kunye nenkcubeko ebalulekileyo, inyanisekileyo. Kodwa Ndidinge ngaphezulu: ukonwaba ngakumbi, umdla omkhulu, nefuthe elingaphezulu.
Akumangalisi ukuba uReverte ebefuna ukunika ukuqhubeka komlinganiswa. Iyaboleka ukuba iqhubeke nokukhupha ubhaka wobubi obonwayo kunye namava kakhulu. Kodwa, ngokoluvo lwam, okanye uyayiguqula indlela kwaye akwazi ukuyenza ibe nomtsalane ngakumbi kunokuba azimisele, okanye uFalcó uya kuhlala kuloo nto. Kwaye kulihlazo. Nangona kunjalo, la manqaku sele eqalile nje. Inokuthi-kwaye kufuneka-iyinike ubume ngakumbi.
Umhlobo oyingozi-Arturo Pérez-Reverte.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Falcó, nguArturo Pérez-Reverte. "Ndiqhwalela ngonyawo abandinyathela ngalo."
Ifomathi yeTomás S. sitsho
Ewe, ndiyifundele uFalcó ngenjikalanga enye, ngentshiseko, kwaye kubonakala kum, ngokungafaniyo nomvavanyi, indlela yoqobo yokusondela kwinoveli yokuhlola ngokuchasene nemvelaphi yemfazwe yamakhaya. Mhlawumbi kuyenzeka ukuba le nto ayithethayo iyinyani, kwaye akakho kwimeko yokuyixabisa. Andicingi ukuba inoveli enje ibhaliwe, kwaye ayikaze ibhalwe malunga nemfazwe yamakhaya ngendlela eyoyikisayo nefanelekileyo. Kwaye ndaye ndaba li-falcoadict, umlinganiswa undirhintyele ngokupheleleyo. Ndifuna idosi elandelayo, kwaye into endikhathazayo yile isaza kupapashwa.
Phendula kuTomás S.
Uphononongo: Ulonwabo olutsha, nguCurro Cañete